Fanitsiana sy fanamboarana ADN
Dingana fananganana DNA
Nahoana no mamorona ADN?
Ny DNA dia fitaovana ara-panafody izay mamaritra ny sela tsirairay. Alohan'ny hametrahana sela dika mitovy ary mizara ho lasa cellules vaovao amin'ny alalan'ny mitosis or meiosis , ny biomolecules sy ny organelles dia tokony kopahana azo zaraina eo amin'ireo sela. Ny ADN, hita ao anatin'ny taokanto , dia tsy maintsy averina averina mba hahazoana antoka fa ny sela tsirairay dia mahazo ny isa tsara indrindra amin'ny chromosomes . Ny duplication ADN dia antsoina hoe replication DNA . Ny fanitsiana dia manaraka dingana maromaro izay misy proteinina maromaro antsoina hoe enzymes sy RNA . Ao amin'ny sela eukaryotic, toy ny sela biby sy ny sela , dia misy ny famokarana ADN ao amin'ny dingana fifindran'ny AD nandritra ny dingan'ny sela . Ny fivoaran'ny ADN dia tena iankinan'ny fitomboan'ny sela, ny fanamboarana, ary ny fanorenana ao amin'ny vatana.
Ny ADN na ny deoxyribonucleic acid dia karazana molecule fantatra amin'ny hoe asidra nokleika . Izy io dia ahitana siramamy deoxyribose 5-kilaometatra, phosphate, ary fototra mitoka-monina. Ny ADN manana diplaoma dia mifototra amin'ny rojo asidra nokleary nokleary izay nivadika ho endrika helix roa . Ity fanodikodinana ity dia mamela ny ADN hahamora kokoa. Mba hampidirana ao amin'ny nosy, dia simba ny ADN ao anaty rafi-tombo-kofehy matevina antsoina hoe chromatine . Ny Chromatin dia manameloka ny endriny amin'ny chromosomes mandritra ny fizarana sela. Alohan'ny famokarana ny ADN, ny chromatin dia mamela manome ny fahazoana fitiliana finday ho an'ny ADN.
Fiomanana ho an'ny fangatahana
Dingana 1: Famolavolana fango fanoratana
Alohan'ny hamerenana ny ADN, ny molekiolan'ny dipoavatra roa dia tsy maintsy "sakanana" ao anaty tady roa. Ny ADN dia manana fotony efatra antsoina hoe adenine (A) , thymine (T) , cytosine (C) ary guanine (G) izay mamaritra eo amin'ny roa tady. Adenine ihany no misy ny thymine ary cytosine ihany no mifandray amin'ny guanine. Mba hamahana ny ADN, dia tokony ho tapaka ny fifandraisana eo amin'ny mpivady fototra. Izany dia tanterahan'ny enzyme fantatra amin'ny anarana hoe helicase DNA. Ny helikase ADN dia manimba ny fifamatoran'ny rano eo anelanelan'ny tahony fototra mba hanasarahana ny tady ho endrika Y izay fantatra amin'ny hoe angadin'omby . Ity faritra ity dia ny modely ho an'ny famokarana hanomboka.
Ny ADN dia fitarihana amin'ny tady roa, izay midika hoe faran'ny 5 'sy 3'. Ity fampatsiahivana ity dia midika hoe ny vondrona hafa dia mifamatotra ny ADN. Ny faran'ny 5 ' dia manana phosphate (P) mifamatotra, raha ny endriny 3 dia manana vondrona hydroxyl (OH) mifatotra. Io fitarihana io dia zava-dehibe amin'ny fangalarana raha toa ka mandroso fotsiny izany amin'ny 5 'hatramin'ny 3'. Na izany aza, ny fangalarana ny famolavolana dia ny tari-dalana; Ny tady iray dia mifantoka amin'ny tari-dàlana 3 'hatramin'ny 5' (tady mitarika) raha iray kosa ny 5 'to 3' (miala sasatra) . Ny roa tonta dia novaina tamin'ny fomba roa samihafa mba hametrahana ny fahasamihafana eo amin'ny fitarihana.
Manomboka ny replication
Ny fitarihana lehibe indrindra no mora ampiasaina. Rehefa tapahana ny tady ADN, dia misy ampahany maromaro ny ARN izay mifandray amin'ny rongony amin'ny endriny 3 amin'ny tendrony. Ny singa fototra dia mamehy foana ho toy ny fiandohan'ny famokarana. Ny primer dia entin'ny ADN voajanahary .
Dingana 3: Famongorana
Ny enzyme fantatra amin'ny hoe DNA polymerases dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana ny tiana vaovao amin'ny alalan'ny dingana antsoina hoe fanonganana. Misy karazany dimy amin'ny karazana ADN ao anaty bakteria sy sela olombelona . Ao amin'ny bakteria toy ny E. coli , ny polymerase III no antibiotika lehibe indrindra, raha ny polymerase I, II, IV ary V no tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana sy ny fanamboarana diso. Ny DNA polymerase III dia mamehy any amin'ny toeram-ponenana ao amin'ny toeram-pitsaboana ary manomboka manampy betsaka ny singa fototra fanampiny amin'ny tady mandritra ny replication. Ao amin'ny sela eukaryotic , ny polyazene alpha, delta, ary epsilon no fototra voalohany azo ampiasaina amin'ny famokarana ADN. Satria ny replication dia mitodika any amin'ny làlana 5 'to 3' eo amin'ilay làlana mitarika, dia mitohy ny endriky vao noforonina.
Ny fikorontanan'ny tady dia manomboka mamerina amin'ny alalan'ny fifehezana amin'ny marika maro. Ny isam-pokontany tsirairay dia sehatra maro samihafa. Ny DNA polymerase dia manampy ampahany ADN, izay antsoina hoe Okazaki , ho eo amin'ny tadin'ny elatra. Tsy mihen-dàlana ity dingan'ny famokarana ity satria ny sombin-tsoratra vao noforonina dia tsy mifanaraka.
Dingana 4: Famaranana
Raha vao miforona ny tsiran-kevitra tsy miato sy tsy mihitsoka, dia esorina ny siramamy RNA rehetra avy amin'ny kofehy tany am-boalohany. Ireo solon'anarana ireo dia atosiky ny fototra mifanaraka amin'izany. Ny fanadihadiana hafa dia "manamarina" ny ADN vao noforonina mba hanamarinana, hanesorana sy hanoloana ny fahadisoana rehetra. Ny anzima iray hafa antsoina hoe DNA ligase dia manatevin-daharana ny sombin-tsarin'i Okazaki miaraka amin'ny tady tokana tokana. Ny endriky ny ADN dia mampiseho olana toy ny DNA polymerase dia afaka manampy fotsiny ny nucleotides ao amin'ny 5 'hatramin'ny 3'. Ny endriky ny tadin'ny ray aman-dreny dia fitambaran'ny ADN miverimberina antsoina hoe telômera. Ny telômera dia miasa toy ny kapoza fiarovana amin'ny faran'ny chromosomes mba hisorohana ny fihanaky ny chromosomes eo akaiky. Ny karazam-panafody ADM, antsoina hoe telomerase, dia manasitrana ny fampidirana ny fizotran'ny telomere amin'ny faran'ny ADN. Rehefa vita ilay izy, dia nitodika ny tongotry ny ray aman-dreniny sy ny ADN ao aminy. Amin'ny farany, ny replication dia mamokatra molekiolan'ny ADN anankiroa, izay samy manana teboka iray avy amin'ny molekiolan'ny reny sy ny tady vaovao iray.
Ny replication ADN dia tsy hitranga raha tsy misy ny enzymes izay manao dingana isan-karazany amin'ny dingana. Ny enzyme izay mandray anjara amin'ny fizotry ny replication ADN eukaryotic dia ahitana:
Ny helikasy ADN - dia mampivadibadika sy manasaraka ADN mifanila amin'ny ADN. Izy io dia mamolavola ny plastika mamaky amin'ny alàlan'ny fandefasan'ny bakteria hidogonotidika ao amin'ny ADN.
DNA primase - karazana RNA polymerase izay miteraka primera RNA. Ny primer dia rôlôlà RNA fohy izay manomboka amin'ny famolavolana ny ADN.
Ny DNA polymerases - manambatra ny molekiolan'ny ADN amin'ny alalan'ny fampidirana ny nucleotides amin'ny fitarihana sy ny famerenana ny ADN.
Topoisomerase na ADN Gyrase - dia mivoatra sy miverina ny tady ADN mba hisorohana ny ADN tsy ho voamarina na ovaina.
Exonucleasen - vondron-kanseran'ny enzymes izay manala ny trondro nukleotide amin'ny faran'ny ADN.
Ny DNA ligase - dia mampiaraka ny sombin'ny ADN amin'ny famolavolana fifandraisana phosphodiester eo amin'ny nucleotides.
Famintinana DNA Replication
Francis Leroy, BIOCOSMOS / Science Photo Library / Getty Images
Ny famokarana ADN dia ny famokarana andian-jiolahy ADN mitovy amin'ny molekiolan'ny ADN. Ny molekiolana tsirairay dia ahitana tavy iray avy amin'ny molekiola voalohany ary kofehy vao noforonina. Alohan'ny famokarana, ny ADN dia manasitrana sy manasaraka. Ny fitambaran-drakitra noforonina dia niorina izay modely ho an'ny replication. Maniry ny ADN ny ADN ary ny ADN dia mampiditra ny fizotry ny nucleotide vaovao ao amin'ny 5 'to 3'. Io fampitahana io dia mitohy ao amin'ny làlambe ary mitongilana amin'ny tara-pahavaratra. Raha vao vita ny famongorana ny ADN, dia voamarina ny tadiny noho ny fahadisoana, vita ny fanamboarana, ary ny fizarana telomere dia atambatra amin'ny faran'ny ADN.
Gene, Traits ary Lalàn'ny Segregation Mendel
Fampidirana ny Tetik'asa Genome Olombelona
Ahoana ny fiasan'ny Gene Mutation?
Fahatakarana ny fe-potoana "Gene Pool" ao amin'ny siansa evolisiona
Lova navelan'ny polygenika
Ahoana ny fiatrehan'ny chromosome
Famaritana ny DNA: Shape, Replication, ary Mutation
Famaritana ny voka-dratsin'ny Genetika, ny antony, ary ny ohatra
Ady Napoleônika: Maritiora Jean-Baptiste Bernadotte
Fanontana Polystyrene sy Styrofoam
Iza no nitarika fikomiana hamono an'i Jules César?
Roma: Famoronana enim-bolana
Biôlôjika sy suffixes: biolojika-chromo- na chromo-
Ady ady: ady ao Cannae
State University GPA, SAT sy ACT Data
Understanding California Used Laws for Salvage Carnivores
30 Zavatra tsy fantatrao momba an'i Elvis
Iza no namorona ny kolejy?
Torohevitra momba ny Psikolojia ara-panatanjahantena ho an'ny mpilomano - Loha Hevitra
University of Illinois Admana-Champaign Admissions
Tetikasan-taonan'ny metaly: Famaritana ny sakana
Top BoDeans Hira nataon'ny '80s
Mivoatra na mivoatra? Ny fizarana izao tontolo izao any anaty ala ary ny tsy fisiana
12 Ikotika Sary avy amin'ny Teleskoopean'ny Space Hubble
Fampifangaroana hevitra (CB)
US Open Scoring Records: Ny Golfers Going Low
Inona moa ny Bucket in Bowling?
Lisitry ny pejy 38 dia mety hampiditra visa any Etazonia sy any ivelany
Ny biography of Jose de San Martin